ပထမဦးစွာလိင်: ရုံအဆိုပါသိပ္ပံ ကျေးဇူးပြု. (2013) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ပထမဦးစွာလိင်: ရုံအဆိုပါသိပ္ပံ ကျေးဇူးပြု. (2013)
တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်သုတေသနပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကိုကျနော်တို့ခန့်မှန်းမယ်လို့ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ proclivities ပုံဖော်ဖို့ပိုပြီးအာဏာရှိသည်, သူတို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ယန္တရားကနေတဆင့်အဲဒီလိုအကြောင်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ငယ်ရွယ်, ကညာကြွက်အပေါ်အောက်ပါသုတေသနစဉ်းစားကြည့်ပါ:
သုတေသီဂျင်မ် Pfaus cadaverine (ဇာတိပကတိအားဆွေးမြေ့၏အနံ့) နဲ့လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်ဖျန်းခြင်းနှင့်အတူအိတ်များအတွက်သူတို့ကိုနေရာချ လူငယ် ကညာ ယောက်ျား။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွက်များသည်အသားများပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ ဒါဟာပင်င်; ဒါကလေ့လာသင်ယူထားတဲ့အပြုအမူမဟုတ်ဘူး။ သူတို့သေကောင်များနှင့် cadaverine တွင်စိမ်ထားသောသစ်သားရွက်တိုင်များကိုသင်္ဂြိုဟ်ကြလိမ့်မည်။
သို့သော်ဤလူငယ်များသည်သူတို့၏ V ကဒ်များကိုဆုံးရှုံးခွင့်ရခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ dopamine မျှော်လင့်ချက်မြင့်တက်နှင့်အတူသူတို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမိတ်နှင့် ejaculated ။ (Dopamine သည်အစာစားချင်စိတ်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုနောက်ကွယ်မှအာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဖြစ်သည်။ )
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကြွက်ငယ်လေးများကိုပုံမှန်အနံ့ရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းမများသည်သေခြင်းကဲ့သို့အနံ့ရှိသောလှောင်အိမ်ကြီးတစ်ခုထဲသို့ချထားသည်။ အဆိုပါ cadaverine-conditioned ကြွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ်ရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသောထိန်းချုပ်ထားသောယောက်ျားများသည်သေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမိန်းကလေးများနှင့်မနီးမဝေးတွင်ရှိသည်။
လေအေးပေးစက်ဟာဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းသလဲ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အခြေအနေအရအပျိုစင်ဟောင်းများသည် cadaverine ၌ပြည့်နှက်နေသောသစ်သားထီးတစ်ချောင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့က၎င်းနှင့်အတူကစားခဲ့ကြပြီး၊ ချောကလက်သို့မဟုတ်မိန်းမအင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းကဲ့သို့သောရိုးရိုးသာမန်အားဖြင့်သူတို့နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်လည်ပင်းညှစ်ထားသည့်အလားလူအများကယင်းကိုတီးခတ်ကြသည်။ ဒီနေ့လူငယ်ညစ်ညမ်းလူငယ်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့နှင့်မကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မိခြင်းဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏအဘယ်ကြောင့်ညည်းညူကြရကြောင်းဤသို့ရှင်းပြနိုင်သည် အခြေခံလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ သို့မဟုတ် Self-image ကို?
"ဘာဖြစ်လို့ဒီ dude ဒီလောက်ပူသလဲ"
တစ်ဦးကကညာအထီးကြွက်မှအေးစက်နိုင်ပါသည် တစ်ဦးလိင်တူချင်းမိတ်ဖက်ပိုနှစ်သက် နှစ်ပတ်ခန့်အတွက် (အရှင်လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဘက်ဇ်ကိုတုပ) သူတွေဟာမိမိအ dopamine တက် jacking ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသီများဟာ dopamine agonist (dopamine အတုယူတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါး) နဲ့တစ်ကညာအထီးကြွက်ထိုးသွင်း, ပြီးတော့အခြားအထီးနဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာသူ့ကိုတင်လိုက်တယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကြွက်ရုံနေ့အဘို့အတူတူထွက်ဆွဲထားကြ၏။ (အဆိုပါ dopamine agonist အကြောင်းကိုတနေ့စနစ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ) သုတေသီများကဆိတ်ကွယ်ရာ2ရက်ပေါင်း, ဒီ4ပိုပြီးအဆထပ်ခါတလဲလဲ။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအထီးကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူ့ system တွင် dopamine agonist မရှိသောကြောင့်သူ့ယောက်ျား၏သူငယ်ချင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုခံသောအမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူလှောင်အိမ်ထဲသို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည် (dopamine သည်သူ့စနစ်မှမရှိကြောင်းသတိရပါ) ။ ဘယ်ကြွက်ကသူ့ကိုအများဆုံးလှည့်သလဲ? သူကအထီးကိုအများကြီးပိုတုန့်ပြန်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက buddy ဟာအပျိုကညာဖြစ်ရင်အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့ကြွက်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသူဟာလူမှုရေးအရတရင်းတနှီးရှိမှုကိုပြသခဲ့သည်။ အကယ်၍ buddy ဟာလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကြွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်အေးဆေးအပျိုစင်ကယောက်ျားလေးရဲ့အပြုအမူကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်လိင်အင်္ဂါပိုမိုစစ်ဆေးခြင်း၊ သုတေသီများကတွေ့ရှိချက်အရအပျိုစင်ကြွက်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သျောလညျးသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကျိန်းသေကတူညီသောလိင်အေးစက်ခြင်းမရှိဘဲနောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်သည့်လမ်းကြောင်းကနေ veered ခဲ့သည်။ (လူကြီးများသည်လူငယ်များ၏ပင်ကိုလိင်အပြုအမူကိုမည်မျှအလွယ်တကူလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းဤသက်သေသာဓကလား။ )
An အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှု ကြွက်များကိုဤနည်းဖြင့်မကုသနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ထို့အပြင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အတုပြုလုပ်ထားသောအေးစက်စက်ကိုရပ်တန့်ပြီးနောက် ၄၅ ရက်အကြာတွင်လိင်တူချင်းလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည် အစောပိုင်းကအရသာမှပြန်လာ.
သင်ပထမ ဦး ဆုံးသောလိင်မှုဆိုင်ရာစွဲမက်ဖွယ်ပုံရိပ် / သင်မြင်တွေ့ရသောသို့မဟုတ်အံ့အားသင့်စရာရှင်းလင်းစွာသတိရမိလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ / အတွေ့အကြုံများသည်အလွန်အစွမ်းထက်သနည်း။ အကြောင်းပြချက်အာရုံကြောဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သည်အမြင့်ဆုံး (၁) တွင်ရှိသည်။ dopamine အဆင့်ဆင့်ရန်, (2) sensitivity ကို dopamine အချက်ပြ နှင့် (3) စွဲမှအားနည်းချက်။ သူတို့ရဲ့ΔFosBအဆင့်ဆင့်ကိုလည်းလူကြီးများထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ (ကယခုအချိန်တွင်အတွက်ΔFosBအပေါ်ပို။ )
အသစ်, တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရွယ်ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများထံမှတုန်ခါသွားစေနိုင်သည်။ ဤအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအရိပ်အလတ်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုရွေးချယ်ရန် ဦး နှောက်များကိုအကြီးဆုံးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရွေးချယ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသောပြင်းထန်သောလိင်လှုံ့ဆော်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အားတကယ့်အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များမြီးကောင်ပေါက်စွဲဘို့အရွယ်ရောက်ထက်အန္တရာယ်ပိုဖြစ်ကြောင်းသတိပေးအဘယ်ကြောင့်မရှိသေးပါကဒီ neurochemical အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသန arousal ၎င်းတို့၏ hypersensitivity ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လုပ်ပေးထက်အသစ်အဆန်း, တုန်လှုပ်ဖွယ်အမှုအရာနှင့်ပင်ရွံရှာဖွယ်အမှုအရာကိုပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ့ပါဆိုလိုတယ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့လိင်သဘာလူကြီးများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အတွက်မဆိုပြင်းထန်သော, ကတုန်လှုပ်ချောက်ချားအတွေ့အကြုံကိုအထိကြိုးရှိခြင်းသူတို့ကိုအလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်စေသည်။ gonzo porn စဉ်းစားပါ။
dopamine သဘာဝကျကျအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့် ဆက်စပ်. တက်လေ့သောအခါ, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်တစ်ဦးမော်လီကျူးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန် ΔFosBအဖြစ်လူသိများ။ A 2013 လေ့လာချက် ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ခိုင်မာကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ osFosB သည် ဦး နှောက်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲစေပြီးအနာဂတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ (နှင့်ဆက်စပ်အချက်များ) ကို ဦး စားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Dendrites များသည်ဆက်စပ်မှုများကိုပိုမိုနှိုးဆွစေရန်အရွက်များထွက်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်များပေါ်လာသောအခါသတိရှိခြင်းသည်လျော့နည်းသွားသည်။ စသည်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်ဤΔFosBယန္တရားကိုပါ ၀ င်သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များကဆင့်ကဲအရဆိုရလျှင် osFosB အတွက်အဓိက ဦး စားပေးမှာမျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုတိုးတက်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ပထမလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံများ (နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ) ကိုချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကြွက်၏ပထမဆုံး cadaverine နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွေ့အကြုံတွင် osFosB ၏သတင်းစကားမှာ“ သတိရ - သေခြင်းအနံ့သည် ပူသောသင်၏ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ”
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်တဝိုက်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖြစ်ပေါ်လျှင်မတူဘဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် ပို. elastic ဖြစ်ပါသည် ပြီးနောက် သာမန်မိတ်လိုက်ပုံစံများကိုထူထောင်ကြသည်။ အတွက်ပြန်ပြောပြသည်ဤသုတေသနကိုစဉ်းစားပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏ Pfaus ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အထီးတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးမိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်မိနစ်အကြာကသူ့လှောင်အိမ်ထဲကသူမ၏ yanked ။ လုံလောက်အောင်အထပ်ထပ်နှင့်အတူ, ဒီသာမန်ထက်အများကြီးပိုမြန် ejaculate သူ့ကိုအေးစက်။ ယောက်ျားသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကာလအတွင်းကဒီပုံစံသင်ယူတယ်ဆိုရင်သူတို့နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးမှမပြတ်မတောက် access ကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်အခါ, ထိုသူတို့အား-ပင်အတူ flyer ။
ခြားနားချက်ကိုမြင်ရဖို့, သုတေသီများလည်းတစ်မိနစ်ပြီးနောက်အမျိုးသမီး yanking အသုံးပြုပုံပိုမြန် ejaculate မှ (ပုံမှန်အမြန်နှုန်းမှာလိင်သင်ယူခဲ့သော) အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယောက်ျားသင်ပေးတယ်။ အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူက start-The အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များကနေအေးစက်ခဲ့ကြွက်သို့သော်-မတူဘဲအမျိုးသမီးမှမပြတ်မတောက် access ကိုခွင့်ပြုသည့်အခါသာမန်မိတ်လိုက်အပြုအမူပြန်လဲကျသွားသည်။
လူ့လူကြီးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်အတူတက်ဒါဟာသုတေသနလိုင်းများ။ သေးငယ်တဲ့ငွေကြေးမက်လုံးမှတုံ့ပြန်မှုများတွင်လူကြီးများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းရှိနေစဉ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနည်းနည်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ဒါပေမဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည် နောက်ပိုင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေပါ။
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ကြောင်းအကြံပြုချက်ကိုလည်းကျနော်တို့ပညာရေးကနေပြန်လည် porn-အသုံးပြုသူများထံမှအဘယ်သို့ကြားနာရသည်နှင့်အတူ aligns ။ သူတို့ရဲ့လိင်သဘာကိုတီထွင်တဲ့သူယောက်ျားတွေ ရှေ့မှာ သူတို့သာ porn-သွေးဆောင် ED ကနေ recover နှင့် 3-D ကိုလိင်ပျော်မွေ့ဖို့လစုံတွဲတစ်တွဲလိုအပ်ပါတယ်အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့အမှန်တကယ်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်အားဖြင့်မှုတ်သွင်း Imagination ၎င်းတို့၏အစောပိုင်းလိင်စိတ်နိုးထကြိုးနှင့် (အတန်ငယ်) လက်တွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသူတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိုအပ်ငြိမ် porn ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ရီးရဲလ်လိင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ပုံရသည်။
ဆနျ့ကငျြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူယောက်ျားတွေထဲကစတင်ခဲ့သူကို အင်တာနက်က porn မှ masturbating, တကယ့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ကျေနပ်လောက်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရရှိရန်မကြာခဏခြောက်လသို့မဟုတ်ထိုထက်မကလိုအပ်သည်။ အများစုသည်သူတို့၏အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကို streaming များ၊ hi-def ဗီဒီယိုများ၊ အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများ၊ အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်အင်တာနက် erotica ကိုအဆင်သင့်ရရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့ကတကယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါပါးစပ်သို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံစဉ်တွင်သူတို့သည်“ ဘာမျှမခံစားရ” ကြောင်းအချို့ကဆိုကြသည်။
သူတို့၏ ဦး နှောက်သည် porn ၏ voyeur အမြင်၊ အကြိုက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် fetishes များကိုအလေးထားခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များထက်ပိုမိုပြင်းထန်သည် (၎င်းသည် dopamine မြင့်မားသောကြောင့်) ကိုမှတ်သားရန်စောစောစီးစီးကြိုးပေါက်သည်။
သူတို့ကမှားအားကစားများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကတစ်ဦးအဘို့အ pixels ကိုမှ climaxing ကိုရပ်တန့်ရန်ရှိသည် ရှည်ရှည်ကာလ သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်အခြား (3-D) လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ (လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့၊ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာဖတ်ပါ။ ) သငျသညျတခုမိန်းမဆောင်တည်ဆောက်။ သူကအဟောင်းကြီးနှင့်အမှန်တကယ်မေတ္တာ၌ကရြောကျဖို့သင်ယူခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ ရှေ့မှာ သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး.)
ကြွက်များသည်ပထမလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏စွမ်းအားကိုသိပ္ပံနည်းကျအသုံးချခြင်းအားနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အမှန်မှာ၊ အပျိုစင်လူသားတစ် ဦး ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုထိုကဲ့သို့နက်ရှိုင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ခြယ်လှယ်ခြင်းကအန္တရာယ်ရှိသည်။
ငယ်ရွယ်သောလူသားများသည်အစောပိုင်းလိင်မှုကိစ္စအတွေ့အကြုံကိုဖြေရှင်းရန်ကြွက်များနှင့်ဆင်တူသည်ကိုသံသယဝင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ အမှန်စင်စစ်ဆယ်ကျော်သက် / pubescent ဦး နှောက်သည်အရွယ်ရောက်သူများ၏ ဦး နှောက်များထက်ဆုချီးမြှင့်ရန်အတွက် ပိုမို၍ ထိခိုက်လွယ်သည်ကိုပြသသောကျယ်ပြန့်သောလူ့သုတေသနပြုချက်ပြီးသားဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းသုတေသနပြုချက်အရလူကြီးဘဝဆယ်ကျော်သက်များကအသုံးမပြုသည့် neurocircuitry ကိုပြန်ခုတ်ထွင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုခုနှင့်ဆက်သွယ်မိပါကစစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်ရန် ပို၍ ခက်ခဲနိုင်သည်။ ကြည့်ပါ အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ?
နောက်တစ်စုံတစ် ဦး က“ ကလေးများသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုအားမည်သူမျှမတားဆီးသင့်” ဟုတစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောသောအခါနောက်တစ်ခေါက်တွင်ကလေးများ၏ ဦး နှောက်သည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထို့အပြင်အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုကပြင်းထန်သောလိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်အစွမ်းရှိသည်ဟုအကြံပြုထားသည် တစ် ဦး ချင်း၏လိင်၏မူလလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်သည် မျှော်လင့်မထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတစ်ခုချင်းစီကိုအော်ဂဇင် climaxing စတင်ပြီးတာနဲ့ အသင်းအားလူတစ် ဦး ၏မူလလမ်းကြောင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲစေသည်။
ကြာကြာလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူ, ပိုကောင်းနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးအသက်အရွယ်-သင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှဝါယာကြိုးသုံးဖြုန်းနိုင်ပါ။ သူတို့အသက်တာ၏ kinky ခြမ်းစူးစမ်းလေ့လာလိုပါကသူတို့ကိုအဲဒီလိုပါစေ ပြီးနောက် သူတို့လူကြီးရောက်ရှိရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်မရှိတော့ Hyper-ပလပ်စတစ်နှင့် Hyper-reactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှဖြစ်ကြသည်။
အဖော်ရှာ-သွေးဆောင်အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ပါဝင်သောအာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှုလိင်အတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးမှု။ (2014)
ရလဒ်များလည်းမိတ်လိုက် NOS ပါဝင်သောအာရုံခံအတွက် Fos ၏ Co-expression ကိုတိုးမြှင့်, ဤတိုးကနဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအထီးကြွက်များ၏ mPOA အတွက် NO ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြ, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံလျှက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ [မှတ်ချက်: NOS နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase =]
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အကြောင်းနာရီဝက်တင်ဆက်မှု။